ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ နေ့စဉ်ထွက် အမှိုက်များအား အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူရန် ကမ်းလှမ်းထား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ နေ့စဉ်ထွက် အမှိုက်များအား အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူရန် ကမ်းလှမ်းထား
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ နေ့စဉ်ထွက် အမှိုက်များအား အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူရန် ကမ်းလှမ်းထား
Posted by yaungchikha on Mar 23, 2012 in Copy/Paste | 15 comments
ဟိုနေ့က ဆူးတင်တဲ့ ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စအတွေးများထဲမှာ အမှိုက်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ပြောထားတာလေးဖတ်မိပြီး၊ စဉ်းစားစရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်၊ အိန္ဒိယက အမှိုက်ဝယ်ယူမှု့မှာ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်အမှိုက်တွေရော ပါနိုင်သလားဆိုတာ ရွာသူားများအထင်လေးလည်း ပြောပြကြပါဦးနော်၊ ခေတ်လူငယ်ဆိုဒ်မှာ ဖတ်လိုက်ရလို့ သတင်းလေးကို ရွာသူားတွေ မဖတ်ရသေးရင် ဖတ်ရအောင်တင်လိုက်တာပါ၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ နေ့စဉ် ထွက်ရှိလျက်ရှိသော စွန့်ပစ်အမှိုက်များအား ဝယ်ယူရန်အတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘာဂမ်ကုမ္ပဏီမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ထံ တင်ပြထားကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း၌ နေ့စဉ် စွန့်ပစ်အမှိုက်များ တန်ချိန်၂၀၀၀ ခန့် ထွက်ရှိလျက်ရှိပြီး ယင်းအမှိုက်များဖြင့် တစ်နေ့လျှင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၅မဂ္ဂါဝပ်ခန့် ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ စွန့်ပစ်အမှိုက်များသည် မီသိန်းဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှု ပမာဏ များခြင်းကြောင့် ယင်းအားအသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မည်ဆိုပါက မှန်လုံအိမ် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှု လျော့နည်းစေမည့်အပြင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရာတွင် သုံးစွဲရမည့် ရုပ်ကြွင်းလောင်စာများမှ အခြားမှန်လုံအိမ် ဓာတ်ငွေ့များ ထုတ်လုပ်မှု မရှိတော့သဖြင့် နှစ်ဖက်နှစ်လမ်း အကျိုးရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း လေ့လာသူများက သုံးသပ်ကြသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သူ အငြိမ်းစား ပါမောက္ခချုပ် ဦးဝင်းကြည်မှ “နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆိုတာ အဓိကကျပြီး အလွန်အရေးပါတာနဲ့အမျှ လူနေမှုစရိတ်တွေ၊ ထုတ်လုပ်ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ ဈေးနှုန်းတွေကလည်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခနှုန်းထားတွေအပေါ် မူတည်နေပါတယ်။ ဒီလို အပြန်အလှန် မူတည်လျက်ရှိနေတဲ့အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ထုတ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ မှန်လုံဓာတ်ငွေ့တွေနဲ့ အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေ။ ပြီးတော့ အမှုန်ထုတ်လုပ်မှုကင်းတဲ့ နည်းစေတဲ့လောင်စာတွေကို သုံးစွဲပြီး ကုန်ကျစရိတ်နည်းမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်” ဟု သုံးသပ်ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ နေ့စဉ်စွန့်ပစ်လျက်ရှိသော အမှိုက်များမှာ ပမာဏအလွန်များပြားပြီး ယင်းတို့၏ အနံ့ဆိုးများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်၌ လေထုညစ်ညမ်းမှုများ ဖြစ်စေနိုင်သည့်အပြင် ယင်းအမှိုက်များအတွက် စွန့်ပစ်သီးသန့် နေရာတစ်ခု သတ်မှတ်ထားရမည်ဖြစ်သောကြောင့် နေရာပေးရမှုများ များစွာပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘာဂမ်ကုမ္ပဏီမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ စွန့်ပစ်အမှိုက်များအား ဝယ်ယူ၍ ယင်းအမှိုက်များမှ ထွက်ရှိသော မီသိန်းဓာတ်ငွေ့များဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရန် သက်ဆိုင်ရာသို့ ကမ်းလှမ်းထားခြင်းအား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပညာရှင်များက ထောက်ခံကြပြီး ယင်းအစီအစဉ် အကောင်အထည် ပေါ်လာပါက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ စွန့်ပစ်အမှိုက်များ ကင်းရှင်း၍ မြို့တော်ကြီး ပိုမိုလှပ စိုပြည်လာမည့်အပြင် ယင်းသို့ ရောင်းချမှုအတွက် ရရှိလာမည့် နိုင်ငံခြားဝင်ငွေဖြင့် အခြားသော ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်း ဆောင်တာများ ပိုမိုလုပ်ဆောင်သွားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ထုတ် News Watch Weekly ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
အဲ့ဒီအစီအစဉ်သာ အထမြောက်အောင်မြင်ခဲ့ရင် တကယ် ကို တချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်ဖြစ်ပြီး အမှိုက်ပြသာနာလည်း အတော် နားအေးသွားမှာ။
ပလတ်စတစ်အမှိုက် ပါနိုင်လားဆိုတော့ အမရေ ကျမလည်း မသိဘူး
ကျမကတော့ ပါနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းတယ် ။ ဒါမှ အဆင်ပြေမှာလေ။ ရွေးပြီး ၀ယ်မယ်ဆိုရင် မလွယ်လောက်ဖူး။
မျှဝေတဲ့ သတင်း နဲ့ link လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ။
အဲဒီ ကနေ ရွာသူ/သား တွေအတွက် ဆက်စဉ်းစားစရာတွေ အများကြီး ထွက်လာမှာထင်ရဲ့။
~~ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ထုတ် News Watch Weekly ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။~~~
ဆိုတာက Back to the Future ရုပ်ရှင် ကို သွားသတိရတယ်။ ;-)
မြန်မာပြည်က အမှိုက်တွေဝယ်ရင် အိန္ဒိယတော့ ရူးသွားနိုင်တယ်
အိန္ဒိယ ရူး၊ မရူးတော့ သိဘူး …
သည်းတော့ ရွာသာကြီး ရောက်မှာ မြင်ယောင်သေး …
အဲဒီ အမှိုက်တွေထဲမှာ ညည်းအမျိုးတွေလည်း ပါချင်ပါမှာလေ …
အဲဒီအခါ … ညည်းလည်း ပဋာစာရီ လို အဖြစ်မျိုးနဲ့ ရူးသွားနိုင်တယ် …
ပဋာစာရီ ရူးတုန်းကတော့ အဝတ်မကပ်ဘူး .. တဲ့ …
ညည်းသာ ရူးသွားလို့ကတော့ ….
အင်း …. အင်း …… အင်းပေါ့လေ …………
သတင်းလေးကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုပါတယ်…၊
အမှိုက်ကင်းစင် ပြုံးပျော်ရွှင် မို့ တကယ် ဖြစ်လာခဲ့ရင် အဆင်ပြေမှာပါ…၊
ကြည့်ရတာ .. အမှိုက်တွေကို စုထားရတော့မှာလား မသိနော့ ..၊
သေချာပြီဆိုရင် လက်တို့ကြပါ ..၊ ။
( စီးပွါးဖြစ် အမှိုက်စု မလို့ ၊ ပြီးရင် မဆူးတို့ မမ တို့ဆီကို လှု မလို့ဗျ )
အမှိုက်ကရွှေဖြစ်တယ်ဆိုတာ အမှန်ဆိုရင်တော့ ရောင်းစေဗျာ အမှိုက်ရှုပ်သက်သာ အသပြာလည်းတိုး
ဒီကိစ္စသာအတည်ဖြစ်သွားရင် ရန်ကုန်၊မန္တလေးမြို့ပြနဲ့တကယ်တူသွားမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားအများစုက
စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်စွန့်ပစ်တတ်ကြတယ် အခုငွေပုံကိုဗန်းပြထားတော့ စီးပွားရှာတဲ့အနေနဲ့အမှိုက်တွေ
သိမ်းရင်းစုဆောင်းရင်း နိုင်ငံကြီးသားတွေပီသသွားရင် တစ်မြတ်ကနေနှစ်မြတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဗျ။
တစ်ကယ်ပဲဖြစ်စမ်းပါစေဦး….။ ရန်ကုန်ကအမှိုက်ပဲလား ……..??????????? နယ်ကအမှိုက်တွေကော အစီအစဉ်မရှိဘူးလား ….?????????????
တိုးတက်တဲ့သူများနိုင်ငံတွေမှာလဲ အဲသည်လို အမှိုက်က စွမ်းအင်ပြန်ထုတ်တယ်လို့ ကျုပ်ရဲ့ပဲပြုတ်ဖေါက်သည် အဖိုးကြီးတွေပြောတာ ကြားဘူးပါတယ်။
တခုပဲ အဲဒီစီမံကိန်းအတွက် မြေဘယ်လောက်တောင်းမလဲမသိဘူးနော်..။
ပြီးတော့ ဘယ်မြေတွေလဲ မသိဘူးနော် (ဘုရား၊ ဘုရား၊ ကျုပ်နေတဲ့ ရွာသာကြီးက အဖီလေးမပါပါစေနဲ့)။
ကျုပ်မသိတာကို ပြောတာပါတော်။ လူကြီးတွေကတော့ သိကြမှာပါ..။
အော်.. အော်.. နောက်တခုရှိသေးတယ်..။
အိန္ဒိယလို နိုင်ငံက ဒီမှာအမှိုက်လာဝယ်ရတယ်ဆိုတော့..
သူ့နိုင်ငံကအမှိုက်တွေ ကုန်သွားလို့လားမသိ ???
အင်းဘိုလိုပြောရင်ရမလဲ။ မြန်မာလိုပဲပြောတာကောင်းပါတယ်။ အမှိုက်ကနေရွှေထွက်ဆိုတာ တကယ်မှန် တာ။ အဲဒီရွှေကိုဒီကတန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း မသိလေတော့ သိတဲ့သူများကပေါပေါပဲပဲဈေးနဲ့ အလကားမတ် တင်းယူသွားကြအုံးမှာ။ ဒို့တိုင်းပြည်က လက်ညှိုးထိုးရောင်းတဲ့ဘ၀ကတော့ အမှိုက်တောင်လက်ညှိုးထိုးရောင်း တာပါကလား။ ဟိုတလောက ဂျပန်ကအသိပြန်လာတုန်းက ဂျပန်က အမှိုက်စနစ်အကြောင်းမေးကြည့် တာ။ ပြည်သူတွေ အတွက်တော်တော်အကျိုးရှိတာ။ ဒီမှာလဲလုပ်ရင်ရနိုင်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ အတွက် အသေး အဖွဲပါ။ ဒါပေမဲ့လဲလေ အမှိုက်နဲ့စီးပွားမရှာချင်ပဲ သစ်တို့ လိုသယံဇာတတွေကိုမှစီးပွား လို့ထင်နေတော့ လဲ ဒို့ရွှေလေးတွေပါသွားပြန်ပေါ့တခါ။ မောင်ဂီရေ ဂျပန်အမှိုက်သိမ်းစနစ်အကြောင်း၊ အမှိုက်ကနေ အသုံးပြုနိုင်အောင် ပြန်ထုတ်တာလေးတွေ အသေးစိတ်ပိုစ့်တခု တင်ပေးပါလား။ ကျွန်မကနားသာထောင်ထားတာ။ အားလုံးမမှတ်မိလို့။ အဲလိုမှန်းသိလိုက်ကူးထားပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ ၀ယ်မယ် ဆိုတဲက အသုံးတည့် လို ၀ယ်တာ ပေါ့။
အမှိုက် မှန်သမျှ ဘယ် အမှိုက် က ဘယ်လို နည်းပညာနဲ့ ရီစိုင်ကယ် လုပ်ရင် ဘယ်လောက် ကုန်ကျပြီး ဘယ်လောက် အကျိုးအမမြတ်ရှိနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ သတင်းဖြန့်ဝေ ဖို့ လုပ်နိုင်ရင် ကောင်းပါတယ်။
ဟုတ်တယ်။ တိရိစ္ဆာအစာနဲ့ မြေသြဇာက အမှိုက်ကနေထုပ်တာတဲ့။ အဲဒီဂျပန်ကမိတ်ဆွေရှင်းပြသွားတာအများကြီးပဲ။ ကျွန်မလေသဘောကျလိုက်တာ။ ဒီမှာလဲအဲလိုလုပ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးနေတာ။ အခုတော့သူများယူသွားပြီပေါ့။
ဘုိးဘွားအမွေအနှစ်..သယံဇာတတွေရောင်းပြီး.. ရတဲ့ငွေတွေနဲ့.. အပ်ကနေလေယဉ်ပျံအထိ… နိုင်ငံခြားက၀ယ်..၀ယ်သုံး..တဲ့မြန်မာပြည်ကြီးက… ကိုယ်သုံးလို့ထွက်လာတဲ့.. အမှိုက်တောင်ထုတ်ရောင်းဖို့.. ပြင်ဆင်လုပ်နေပြန်ပါပေါ့လား..
မြန်မာတွေကမ္ဘာမှာလူတန်းစေ့မနေနိုင်ကြတော့တာ.. စံနစ်ကြောင့်.. မဟုတ်ဖူးဟေ့…။
ဒဂျီးရယ် စံနစ်ကြောင့် မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာ လက်ခံပါတယ် တကယ်က စနစ်ကြောင့်ပါ။ (သင်ခန်းစာ – သဒ္ဒါမတတ် စာမတတ် ရွာမှာအရှက်ရ)
အိန္ဒိယက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ဖို့ ရန်ကုန်မြို့ထွက် အမှိုက်ဝယ်မယ်ဆိုတာ တစိတ်တပိုင်း ဝန်ခံချက်သာ ဖြစ်ဖို့မျာတယ်။ အခြား အကျိုးရလဒ် များစွာရှိနိုင်တယ်၊ ဥပမာ မြေဩဇာအဖြစ်အသုံးချလို့ရတာ၊ ပလပ်စတစ်၊ သစ်သား၊ ဒန်သတ္တု၊ စက္ကူပျော့ဖတ် စတာတွေ သန့်စင်ကျိုချက် ပြန်သုံးနိုင်တာ။ သို့သော်လည်းပေါ့လေ ကိုယ်ကမှ မလုပ်နိုင်တာ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ။ ဖဲရိုက်မစားတတ်မှတော့ အကောက် ကောက်ပြီးထိုင်စားပေါ့။ အကောက်ယူစားတဲ့ ဘဝကနေ ရေရှည်မှာ ဖဲဒိုင်ဖြစ်ပါစေလို့သာ ဆုတောင်းပါ၏။
အပျက် စာရင်း ပြသလို ဆို … အမှိုက် .. တွေ အမှိုက် တွေ ……. နဲ့ ရောပြီး ….. အင်း …..
စိုးမိတယ်.. စိုးမိတယ် ကွယ်
5မီဂါဝပ် ထွက်တယ်ဆိုတော့ မရောင်းပဲ နည်းပညာဝယ်ပီးမိမိဘာသာ လျှပ်စစ်ထုတ်သင့်ပါတယ်..